Ndị ọrụ nkwari akụ Pan Pacific Toronto kwadoro nkwekọrịta ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị ọrụ nkwari akụ Pan Pacific Toronto kwadoro nkwekọrịta ọhụrụ
Ndị otu Unifor 112 nọ n'ụlọ nkwari akụ Pan Pacific Toronto kwadoro nkwekọrịta ọhụrụ na onye were ha n'ọrụ pasent 100.
“Unifor bụ njikọ nke Canada maka ndị ọrụ ile ọbịa,” ka Jerry Dias, Onye isi ala mba Unifor kwuru. "Enwere m oke nganga maka ọrụ kọmitii na -ahụ maka ịre ahịa 112 mpaghara anyị mere iji nweta ụdị nkwekọrịta siri ike n'oge ndị a siri ike."
Mkparịta ụka ndị na -elekọta ụlọ oriri na ọ wereụ byụ na -enye nsogbu ego ọnwa ole na ole maka ego ahụike na ọdịmma ndị ọrụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ na atụmatụ ezumike nka. Unifor Local 112 nwere ihe ịga nke ọma na mbụ n'usoro iwu nyere ụlọ oriri na nkwari ahụ iwu ka ọ kwụọ $ 200,000 na nkwụghachi azụ na ọmụrụ nwa.
John Turner, Onye isi ala 19 mpaghara kwuru, "Ikwu na ọrịa COVID-112 bụ ihe na-emebi ndị ọrụ ile ọbịa bụ okwu ekwesighi. "Ọrịa ọjọọ ahụ egosipụtala nke ọma mkpa ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ nwere nchebe nke otu na -aza ajụjụ maka ndị were ọrụ."
Nkwekọrịta a na-agbatị ikike icheta ndị otu, gụnyere ikike icheta ọrịa metụtara ruo mgbe Machị 2023, ikike icheta ebighi ebi maka nkwụsị ọ bụla metụtara nrụzigharị, yana izu iri asaa na asatọ nke ikike icheta maka nkwụsị ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, e jirila mkpebi siri ike mee ka asụsụ nchekwa ndị ọrụ dị n'otu ghara ime ka ụlọ nkwari akụ ahụ bụrụ ụlọ ezumike. Nkwekọrịta ahụ na -ewepụtakwa ọnọdụ onye ọka ikpe ziri ezi agbụrụ iji kwado ndị ọrụ ojii, ụmụ amaala na agbụrụ.
Mmezi akụ na ụba zuru oke nke nkwekọrịta a gụnyere mmụba ụgwọ ọrụ, onyinye onye ọrụ dị elu maka uru ahụike na ụgwọ ezumike nka, ọnwa itoolu nke mkpuchi ọgwụ ọgwụ ezinụlọ maka ndị ọrụ oge niile, ihe mgbakwunye $ 5 kwa ụbọchị, yana mmachi ezumike ezumike ka mma, nke kachasị elu a na -echekwa ngalaba nkwari akụ Toronto. Onye were ya n'ọrụ kwenyere na usoro nhazi oge ịkwụghachi ụgwọ fọdụrụ n'ime ego onye were ya n'ọrụ na -akwụ ego ahụike na ọdịmma ndị ọrụ yana atụmatụ ezumike nka.
Ewelitekwara ọrụ nchekwa ụlọ, gụnyere enweghị awa nke ndị na -elekọta ụlọ nkwari akụ ahụ kwesịrị ma ọ bụrụ na họtel họpụtara maka mmemme 'nhọrọ oke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ' n'ọdịnihu. Ndị na -elekọta ụlọ Pan Pacific na -ehicha ihe karịrị ụlọ iri na anọ kwa ụbọchị.
Andrea Henry, onye isi oche otu 112 mpaghara na nkwari akụ Pan Pacific kwuru, "N'ihi ịdị n'otu nke ndị na -ere ahịa anyị na ịdị n'otu nke ndị otu anyị, anyị enwetala nkwekọrịta nke na -ebute ihe ndị kacha mkpa." "Ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ ataala ahụhụ nke ukwuu na ọrịa a, enwere m mpako na anyị emela nnukwu mgbanwe maka ndị otu."
Unifor bụ ọgbakọ kachasị na Canada na mpaghara onwe, na -anọchite anya ndị ọrụ 315,000 na mpaghara akụ na ụba ọ bụla. Ndị otu ahụ na -akwado ndị ọrụ niile na ikike ha, na -alụ ọgụ maka ịha nhatanha na ikpe ziri ezi na Canada na mba ofesi, ma na -agba mbọ ịmepụta mgbanwe na -aga n'ihu maka ọdịnihu ka mma.
IATA: A na-achọ ibu ụgbọ elu zuru ụwa ọnụ 9.4% na Ọktọba
Emirates na Gulf Air: Enweghị asọmpi ọzọ?
Onye kọmishọna ukwu nke Canada na Jamaica na ...